नाडेप लघुवित्तले अवितरित हकप्रद लिलामीमा विक्री गर्दै | गृहपृष्ठ
Home लगानी नाडेप लघुवित्तले अवितरित हकप्रद लिलामीमा विक्री गर्दै
on: February 22, 2019 लगानी
फागुन १०, काठमाडौं (अस) । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ६१ हजार २ सय ३६ कित्ता शेयर लिलामीमा विक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले यस अघि वितरण हुन नसकेको हकप्रद शेयर फागुन १९ गतेदेखि लिलामीमा विक्री गर्न लागेको हो । खरीद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरुले फागुन २८ गतसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
शेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता रू. १०० तोकिएको हुँदा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी बोलकबोल गर्नुपर्नेछ । एकै व्यक्ति वा कम्पनीले विभिन्न मूल्यमा शेयर खरीदका लागि भिन्दा भिन्दै शिलबन्दी खामभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । बोलपत्र पेश गर्दा न्यूनतम १०० कित्ता वा सो भन्दा बढीको लागि १० अंकले भाग जाने संख्यामा या अधिकतम सम्पूर्ण कित्ताको लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
रू. १० लाखसम्मको आवेदन दिनेले स्वेच्छिक रुपमा र सोभन्दा बढी रकमको लागि आवेदन दिनेले अनिवार्य रुपमा आफ्नो प्यान नम्बर आवेदन फारममा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । विक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी नबिल बैंकले लिएको छ ।
कम्पनीले शेयर लगानीकर्ताहरुका लागि मंसिर २३ देखि पुस २९ गतेसम्म हाल कायम चुक्तापूँजीको शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गरेको थियो । सो अवधिमा वितरण हुन नसकेको सर्वसाधारण तर्फको शेयर लिलामी प्रकृयाबाट विक्री गर्न लागेको हो ।
नाडेपको हाल रू. १६ करोड चुक्तापूँजी रहेको छ । हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३२ करोड पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्ताहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत कम्पनीले गरिसकेको छ । साथै, बोनसमा लाग्ने कर तिर्नका लागि पनि कम्पनीले १ दशमलव ५७ प्रतिशत नगद लाभांश पनि दिनेछ । यसका लागि प्रस्तावलाई आगामी साधारण सभाले पारित गर्नुपर्नेछ । दोस्रो बजारमा नाडेपको अन्तिम शेयर मूल्य बिहीवार रू. ७ सय ३० कायम भएको छ ।
नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, १२ जेठ २०७६)
गत आवको तुलनामा नाडेप लघुवित्तको नाफा घट्यो कि बढ्यो ?
बिहीवार साधारण सभा हुन लागेका तीन कम्पनीहरु कुन ?
दुई कम्पनीको मूल्य समायोजन